यौन कर्मीहरुलाई प्राय सबै देशहरुमा नराम्रो नजरेले हेर्ने गरिन्छ भने समाजको गन्दकिको रुपमा लिने गरिन्छ। प्राय देशमा यौन कर्मीहरुलाई गैरकानुनी मानिने गरिन्छ। नेपालमा देह व्यापार गर्नेहरुलाई कस्तो नजरले हेरिन्छ भन्ने त तपाईलाई बताई राख्नु नपर्ला। विश्वमा एउटा यस्तो देश रहेको छ,जहाँ यौन कर्मीहरुलाई समाजसेवीको दर्जा दिइने गरिन्छ। न्युजिल्यान्डको इमीग्रेशन वेबासाइटले यौन कर्मलाई ‘कुशल रोजगार सूची’को समावेस गरेसँगै देह व्यापारले समाजसेवीको दर्जा पाएको हो।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार न्युजिल्यान्डको इमीग्रेशन वेबासाइटले बनाएको सुचीमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड व्यवसायको मानक वर्गीकरण(एएनजेडएससीओ)मा यौन कर्मलाई पाँचौं स्थानमा सूचीकरण गरिएको छ। यदि यौन कर्मी प्रति घण्टा ३६.४४ डलर कमाउन सक्छ भने त्यस देशमा सिधै भिषा आवेदनबाटै प्रवेशाज्ञा पाउने अंकित गरिएको छ। न्युजिल्यान्ड एसोसिएशन अफ माइग्रेशन एंड इन्भेस्टमेन्ट (एनजेडएएमआई)का अनुसार यस प्रकारको भिषा प्राप्त गर्न चाहने यौनकर्मीले सिधै आवेदन पाउने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
यस सुचिमा सुचिकृत भए पनि अहिले सम्म कोहिले पनि यस सुचिमा सुचिकृत हुनुको फाइदा उठाउन भने कोहि सफल नरहेको जानकारी स्थानीय यौनकर्मीको मामलामा काम गर्ने संस्था न्युजिल्यान्डको सामूहिक वेश्यावृत्ति सस्थाकि सह-संस्थापक कैथरीन हीलीले बताईन्। यस कुरालाई लिएर भने स्थानीय यौन कर्मिको भने चिन्ता बढेको बताउने गर्छन्।
बाहिरी यौनकर्मीले देशमा यौन सेवा दिनुलाई स्थानीय यौनकर्मीले गैरकानुनी हुने बताउने गरेका छन्। यस विषयमा विभिन्न भनाइ बाहिर आइरहेको छन्। वेश्यावृत्ति सुधार अधिनियम २००३का अनुसार अस्थायी भिषा लिएर यौन कर्म गर्न पाउन नहुने स्थानीय यौनकर्मिको क्षेत्रमा काम गर्ने सस्थाका प्रवक्ता बताऊछन्। यस प्रकारको भिषा व्यवस्थाको कोहिले पनि प्रयोग गरेको थाहा नभएको बताउने गर्छन् स्थानीय यौनकर्मी।
प्रकाशित : आइतबार, बैशाख १६, २०७५१४:१६
उत्तर कोरियासँग वार्ता विषयमा बोले राष्ट्रपति ट्रम्प!
यी शौचालयको डिजाइन कसले गर्यो अहिले सम्म पत्ता लाग्न सकेन ! हाँसो लाग्ने डिजाइनहरु हेर्नुहोस् !
यौनबारे १० तथ्य जसले तपाईंको दिमाग घुमाइदिन्छ !
हेर्नुस् दिमाग घुमाउने केही अचम्मका तस्बिरहरू (फोटो फिचर)
रुसी राष्ट्रपतिमा पुनः पुटिन निर्वाचित !
सेक्सपछि पनि ‘भर्जिन’ बन्छन् युवतीहरू , कसरी ?